Maraykanka, 08 February 2019
Khamiis 8 February 2019
Africom: Waxaan Duqeymo ku Dilney 15 Shabaab ah
Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeymo ay ka geysteen 48-diii saac ee la soo dhaafay deegaanno ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ay ku dileen 15 ka tirsan maleeshiyada ururka al-Shabaab.
Maxaa ka run ah waxyaabihii uu sheegay Trump?
Waxyaabihii uu sheegay Madaxweynaha waxaa ku jiray qaar badan oo xaqiiqdooda aysan sax ahayn, kuwo marin habaabin lagu tilmaamay, tirooyin uu qalday iyo kuwo uu ka badbadiyay.
Stacy Abrams oo u jawaabtay Trump
Trump oo jeediyey khudbaddii sanadlaha ahayd
Khubaddiisa waxa uu si gaar ah kaga hadlay dhaqaalaha, arrimaha socdaalka, qodobka muranku ka taagan yahay ee darbi laga dhiso xuduudda Maraykanka iyo Mexico iyo qodobo kale.
Trump oo caawa jeedin doona khudbadda "Qaranka"
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa la filayaa in caawa uu jeediyo khudbadiisa labaad ee qaranka, isaga oo la hadli doono xubno badan oo ku cusub aqalka congress-ka, oo ay ku jiraan haween iyo kuwa kasoo jeeda bulshooyinka laga tirada badan yahay.
Maraykanka oo soo qaadaya qaxootigii xeryaha Nauru
Dawladda Australia ayaa sheegtay in hadda wixii ka dambeeya ayna caruur ku heyn doonin xeryaha dadka magan-galyo doonka ah ee ku yaalla Jasiiradda Nauru ee Badweynta Pacifiga
Mareykanka oo ka baxay heshiiska Nuclear-ka INF
Dowladda Mareykanka ayaa maanta ku dhowaaqday inay ka baxeyso heshiiska tobanaanka sano jira ee xakameynta hubka Nuclear-ka ee ay kula jirtay Ruushka.
Wada-hadallada Mareykanka iyo K/Waqooyi oo horumar kooban un sameeyey
Dowladda Mareykanka ayaa horumar kooban oo kaliya ka sameysay wada-hadallada Nuclear-ka ee Korea-da Waqooyi, waxaaa sidaas qirtay ergeyga gaarka ah ee Washington u qaabilsan Korea-da Waqooyi, Stephen Biegun.
Mareykanka iyo Taliban oo dhisaya guddiyo farsamo
Dowladda Mareykanka iyo kooxda Taliban ayaa isku raacay in labadaba ay dhisaan laba guddi farsamo oo go’aan ka gaaraya habka ay ciidamada Mareykanka iyo NATO uga baxayaan dalka Afghanistan.
Xaalad deg deg ah oo lagu soo rogay gobolka Washington
Xaalad deg deg ah ayaa la geliyay gobolka Washington ee dalka Mareykanka, ka dib markii ay cudurka jadeecada uu ka dilaacay.
J. Bolton oo u Digay Xeer Ilaaliyaha Venezuela
Lataliyaha Amniga Qaranka Maraykanka John Bolton ayaa u digay Xeer Ilaaliyaha dalka Venezuella, isaga oo sheegay in cirib xumo uu la kulmi doono, ka dib markii xeer Ilaaliyuhu uu sheegay in uu Maxkamadda Sare ee dalka ka codsaday in hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido uuna dalka ka bixin.